Khabiirka Kubbada Cagta Spain Ee Guillem Balague Oo Faah Faahiyay Sababta Dhabta Ah Ee Barcelona U Doonayso Iibinta Lionel Messi. - Gool24.Net
Khabiirka Kubbada Cagta Spain Ee Guillem Balague Oo Faah Faahiyay Sababta Dhabta Ah Ee Barcelona U Doonayso Iibinta Lionel Messi.
Khabiirka kubbada cagta Spain ee Guillem Balague oo la shaqeeya warbaahino kala duwan oo dalalka Yurub ah ayaa shaaciyay sababta dhabta ah ee ay maamulka kooxda Barcelona ku doonayaan in ay Lionel Messi u ogolaadaan in uu kooxdooda ka bixi karo.
Lionel Messi ayaa shalay dib ugu soo laabtay magaalada Barcelona halkaas oo uu kulankii ugu horeeyay kula yeeshay macalinka cusub ee kooxdiisa ee Ronald Koeman wuxuuna Messi muujiyay sida uu ugu jiro xaalad jaho wareer ah.
Laakiin khabiirka kubbada cagta Spain ee Guillem Balague ayaa shaaciyay in maamulka Bartomeu uu doonayo in Messi uu baxo si ay kooxdooda ugu badbaadiyaan mushaarka waalida ah ee uu qaato isla markaana ay lacago badan oo ay kooxda dib ugu dhisi karaan u helaan.
Guillem Balague waxa uu xaqiijiyay in madax waynaha Barcelona uu jeclaysanayo go’aanka Messi ku doonayo bixitaanka isaga oo xusay in Barca ay doonayso sidii ay dhibaato kala kulmayaan mushaarka 50 milyan yuro ah ee uu Messi sanadkii qaato.
Khabiir Guillem Balague oo inta badan xog muhiim ah oo xaqiiqda u dhaw bixiya ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray fariintan wuxuuna yidhi: “Muhiim ayay madax waynaha Barcelona u tahay in Messi uu doonayo in uu tago. Nolosha ayay u fududaynaysaa maaliyada kooxda oo laga hadlayo in dayn ahaan loogu leeyahay €500-€700 milyan, haddii ay kooxdu badbaadin karto mushaarkiisa”.
Laakiin Guillem Balague ayaa xusay in ayna ilaa hadda jirin koox diyaar u ah in ay bixiso lacagta heshiiska Messi lagu burburin karo wuxuuna yidhi: “Wali ma jirto cid qaadanaysaa sababtoo ah dhibaatada dhaqaale – waa mushaar 50 milyan cashuurta kadib ah iyo lacagta heshiiskiisa lagu burburin karo oo €700 milyan yuro ah”.
Guillem Balague oo sharaxaadiisa sii wata ayaa yidhi: “Laakiin waxaad dareemaysaa in ayna kooxdu isbadalkan ku faraxsanayn. Messi ma faraxsana, waxa uu tababaraha u sheegay in aanu hubin waxa xiga ee uu samayn doono. Waxaan ka shakisanahay in dusinta shirkii shalay uu ka yimid dhinaca Messi. Waxay aad ugu haboon tahay qorshaha kooxda”.
Hadalka Guillem Balague ayaa muujinaya in Barcelona ay doonayso in Messi uu dabada ka riixo bixitaankiisa isla markaana ay helaan koox ay lacago badan kaga iibiyaan si ay dhaqaalaha kooxdooda ee daynta badan lagu yeeshay ugu xaliyaan isla markaana ay mushaarkiisa waalida ah meesha uga saaraan.
Laakiin ilaa hadda ma jirto koox diyaar u ah in ay Lionel Messi ka saarto Barcelona halka kabtanka reer Argentina uu ku jaho wareersan yahay go’aankii kama danbaysta ahaa ee uu gaadhi lahaa.